Ukubaluleka Kokuqeqeshwa Kwabasebenzi Abahlinzeka Ngolwazi Nokusekelwa Okuqhubekayo
Ukubaluleka Kokuqeqeshwa Kwabasebenzi Abaqeqeshi
Ibhalwe ngu-Andres Borasino, Umphathi Wezentengiso Wezangaphandle.
Ama-dredges yimishini ebizayo esetshenziselwa ukukhipha izinto ezibalulekile nokwenza izinhlobo ezahlukahlukene zamaphrojekthi abalulekile. Ezinye izinhlelo zokusebenza ezivame kakhulu ukwakhiwa kwesihlabathi, ukumba izimayini kanye nokwehlisa ukuzulazula. Osonkontileka be-Dredge batshala imali enkudlwana yemali ekusebenzeni kwabo kokukhipha amandla ngakho-ke kubalulekile ukuqinisekisa ukwanda kokusebenza.
[soliloquy id = "112 ″] U-Ellicott ube nenjabulo yokuhlangana nabaningi abaqhuba kahle kakhulu emkhakheni we-dredge. I-dredge opharetha esebenzayo ayigxilile kuphela ekukhuliseni ukukhiqizwa, kepha nasekusebenzeni kahle nasekugcineni i-dredge nemishini ehambisana nayo. Lezi yizo zonke izici ezidingekayo ekuhlangabezaneni nezinhloso zephrojekthi. Amandla we-dredge opharetha abaluleke njengamakhono we-dredge uqobo.
Izindaba ezimnandi ukutshalwa kwemali okudingekayo ukuze kuthuthukiswe amakhono opharetha kuncane kakhulu uma kuqhathaniswa nokutshalwa kwemali kwephrojekthi. Ukutshala imali ekuqeqeshweni kwe-opharetha kuveza imiphumela ngokushesha futhi imiphumela idlulela ngale kwephrojekthi eyodwa. I-dredge opharetha esebenzayo izonikela ekufinyeleleni ezinhlosweni zephrojekthi kanye nokwelula impilo yokusebenza nokugcina inani lemishini yokwakha kabusha. Ukuqeqeshwa kubalulekile kubahlinzeki abasha kanye nabasebenza ngokuhlangenwe nakho ababhekene nezimo ezintsha kanye / noma ezehlukile zokwehla. Ukuqeqeshwa ekusebenzeni kwe-dredge nakho kubalulekile kubaqondisi bephrojekthi kanye nabaphathi abadinga ukuqonda okuphelele ngezimo ezithinta ukusebenza kwe-dredge. Uma bonke abasebenzi abafanele bathola ukuqeqeshwa okufanele, kuzoba nezinkinga ezimbalwa futhi ngenxa yalokho ukunakekelwa okungahlelwanga okuhleliwe ngesikhathi sokusebenza. Ngokwenza ngcono ukukhiqiza nokunciphisa isikhathi sokuphumula, opharetha uzokwazi ukufeza ukukhiqizwa okuphezulu. Ngokwengeziwe, ukuqeqeshwa kuzosiza ekuqinisekiseni ukuthi i-dredge isebenza ngokuphepha.
Umkhiqizi we-dredge onokwethenjelwa kufanele akwazi ukuhlinzeka lolu hlobo lokusekelwa kumakhasimende akhe. E-Ellicott sinikela ngezifundo ze-dredge simulator nokuxhaswa okuqhubekayo kwensimu nokubonisana emhlabeni wonke. Sikholelwa ngokweqiniso ekwakheni ubudlelwano besikhathi eside namakhasimende ethu, futhi sikholwa ukuthi lokhu kufezwa ngokuqinisekisa ukuthi amakhasimende ethu afinyelela izinhloso zawo ngemishini yethu.